अष्ट्रेलियामा तीन दिनयता फैलिरहेको भीषण आगलागी सिड्नीसम्म पुग्यो - Sabal Post
अष्ट्रेलियामा तीन दिनयता फैलिरहेको भीषण आगलागी सिड्नीसम्म पुग्यो
अष्ट्रेलिया – अष्ट्रेलियामा विगत तीन दिनयता फैलिएको डढेलो नियन्त्रण हुन नसक्दा सिड्नीसम्म फैलिएको छ । मङ्गलबार न्यू साउथ वेल्समा मात्रै ६० बढी स्थानमा भीषण आगलागी भएको छ । अष्ट्रेलियामा अहिले तापक्रम बढ्दो छ र हावाको बेग पनि उच्च भएकोले ढडेलो निकै कम समयमा फैलिने अधिकारीले चेतावनी दिएका छन् । यो क्षेत्रमा करिब ६० लाख मानिसको बसोबास छ । अति संवेदनशील क्षेत्रका बासिन्दालाई झाडीयुक्त स्थानमा नबस्न र आगलागी आफ्नो घरसम्म आइनपुग्दै अन्यत्र सर्न सरकारले आग्रह गरेको छ । उक्त राज्यका ६ सय विद्यालय बन्द गरिएका छन् आगलागीका कारण न्यू साउथ वेल्स र क्वीन्सल्याण्डमा सात दिने सङ्कटकालको घोषणा गरिएको छ ।
कति भयानक छ आगलागी ? न्यू साउथ वेल्स र क्वीन्सल्याण्डमा गत शुक्रबारदेखि फैलिएको आगोका कारण तीनजनाको मृत्यु भएको छ भने दुई सयभन्दा घरहरुमा क्षति पुगेको छ । विशेषज्ञले यो आगलागीलाई भिक्टोरियाको सन् २००९ को ‘ब्ल्याक स्याटरडे बुसफायर’ सँग दाँजिरहेका छन् जसमा १ सय ७३ जनाको मृत्यु भएको थियो । सिड्नी र उक्त शहरको उत्तरी र दक्षिणी भेगमा यस्तो ‘भयानक’ स्तरको आगलागी भएको यो पहिलो घटना हो ।
मङ्गलबार के हुँदैछ ? अधिकारीले न्यू साउथ वेल्समा मङ्गलबार ‘चरम, गम्भीर र विनाशकारी’ दिन हुनसक्ने चेतावनी दिँदै तापक्रम ३७ डिग्री सेटिग्रेटसम्म बढ्न सक्ने जानकारी दिएको छ । यस्तो भयानक स्थितिमा आगलागीले निकै द्रुत गतिमा र निकै सजिलै भयानक रुप लिनेछ,’ न्यू साउथ वेल्सका रुरल फायर सर्भिस कमिश्नर सेन फित्जिमोन्सले बताए । उनका अनुसार तीन हजार अग्नी नियन्त्रक फ्रन्टलाइनमा छन् । अन्य राज्य र न्यूजिल्याण्डबाट पनि अग्नी नियन्त्रक खटाइएका छन् । अष्ट्रेलियाको सुरक्षाबल पनि सहयोगका लागि सतर्क छन् । तत्कालका लागि क्वीन्सल्याण्डमा आगलागीको खतरा कम रहेपनि हप्ताको अन्तिममा खतरा उच्च रहने चेतावनी जारी गरेको छ । मङ्गलबार दक्षिणी अष्ट्रेलियामा पनि दर्जनौँ आगलागीको घटना देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले सरकारले आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन् । – एजेन्सी
नेपाली समाज कनेटिकेट को नेपाली नयाँ बर्ष…
रामेछापमा धावनमार्गबाट जहाज चिप्लियो
सैनामैना महोत्सव देस्रो दिन पनि जारि, शानिबार…